စက်တင်ဘာထာဝရ၏ ဘာသာရေးဆွေးနွေးချက်များ: စက်တင်ဘာထာဝရဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း စာကြည့်တိုက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူဒေလီ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း.........
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီဟာပြည်နယ် ဂါယာမြို့ဗုဒ္ဓုဂါယာရှိဘုရားပုံတော်များ ကြည်ညိုသဒ္ဒါတရားပွားများနိုင်ကြပါစေ။
ဗုဒ္ဓမြန်စွာ လောင်းလျာတုန်းက နောက်ဆုံးအထိ ပါရမီ။ လူ နတ် များစွာ ချမ်းသာရေးမို့ အသက်ပေးလို့ ဖြည့်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ သာသနာတွက်မို့ ငါပါ အသက်ဆုံးပါစေ။ နောက်မဆုတ်ပေါင် ခုလိုတွေးလို့ ကုသိုလ်ရေးမို့ ကြိူးစားမည်။ အဲဒါမှ…………. ဗုဒ္ဓ ညွန်ကြား လမ်းစဉ်များ ကျင့်သွားထိုမှာ အေးငြိမ်းချမ်းသာမည်။ အရှင်ထာဝရ
တရားပွဲ့ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ
အကြင်မျှလောက် ကာလပတ်လုံး... နေမင်းသည် မထွက်ပေါ်လာသေး... ထိုမျှလောက် ကာလပတ်လုံး... ပိုးစုန်းကြူးသည် တောက်ပသေး၏...။ နေမင်းထွက်ပေါ် လာသောအခါ ... ထိုပိုးစုန်းကြူး... အရောင်ပျောက် သကဲ့သို့ ... မတောက်ပနိုင် သကဲ့သို့ ထို့အတူ... အကြင်မျှလောက် ကာလပတ်လုံး... လောက၌ အလုံးစုံသောတရားတို့ကို... ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော... မြတ်စွာဘုရားတို့သည် မပွင့်ကုန်သေး... ထိုမျှလောက် ကာလပတ်လုံး... ကြံဆကာမျှဖြင့် ယူဆတတ်သော... တိတ္ထိတို့၏ အရောင်သည် ... တောက်ပနိုင်သေး၏...။ အကြင်အခါ ... မြတ်စွာဘုရားတို့သည် ပွင့်ကုန်၏... ထိုအခါ ကြံဆကာမျှဖြင့် ယူတတ်သော တိတ္ထိတို့သည် လည်းကောင်း... တပည့်တို့သည် လည်းကောင်း... မတောက်ပကုန်... ဖောက်ပြန်သော အယူရှိသူ... တိတ္ထိတို့သည် ... ဆင်းရဲမှ မလွတ်နိုင်ကြကုန်...။ အရှင်ထာဝရ
အင်္ဂါနေ့အား တပတ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့
အင်္ဂါနေ့အား တပတ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ မေတ္တာနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး မေတ္တာသုတ်ကို နေရာအနှံ့မှာ ရွတ်ဆိုကြပါရန် ။
Mahagandayon Monastery - Myanmar 2007 burm
နိုက်ကလပ်မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ (၁)
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကြွင်းကျန်ဆဲ မြန်မာ့ဗုဒ္ဓဘာသာ (ရုပ...
စက်တင်ဘာထာဝရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း စာကြည့်တိုက် ဓါတ...
စက်တင်ဘာထာဝရဘုန်းတော်ကြီး အရှင်ထာဝရမှ အန္ဒိယနိုင်ငံ...
စက်တင်ဘာထာဝရဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း စာကြည့်တိုက် အိန္ဒ...
စွန့်စားမှုသည် အဓိက လူမျိုး ဘာသာ သာသနာ ပညာ ဥစ္စာ
တို့သာသနာ တို့ဘာသာ (2)
မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ (3)
မဟာသမယသုတ် ပါဠိတော်- မြန်မာ (1)
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရန် (1)
အနတ္တလက္ခဏသုတ် မြန်မာပြန် - အနတ္တလက္ခဏသုတ် အမွှန်း - (1)
် နှိုးဆော်စာ (1)
စက်တင်ဘာထာဝရ၏ ဘာသာရေးဆွေးနွေးချက်များ အာက်ပါလိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ် နိုင်ကြပါသည်။
110018, New Delhi,
Mobile No. +91 9953208002
အမှတ်တရ သာသနာပြု ဓါတ်ပုံများ
ဗုဒ္ဓ ပန်ချီင်္း အမှတ်တရ ပုံများ ........
စက်တင်ဘာထာဝရဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း စာကြည့်တိုက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူဒေလီ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း.........
Posted by စက်တင်ဘာထာဝရ at 8:28 PM
နှစ်သစ်ဆုတောင်း မြန်မာ ပြည်သူများနှင့် ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအပေါင်းတို့အား နှစ်သစ် မင်္ဂလာမှာသာယာဝပြောသောတိုင်းပြည်နှင့်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများဖြစ် ကြပါစေ့လို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း နူတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။ နှစ်သစ် မင်္ဂလာမှာ လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့ အမှား အမှန်တွေ ဘေးဖယ်ထားပြီး ရှေ့ဆက်ကြိုးစားဖို့ ပဲလိုပါတယ်။ နိုင်ငံနဲ့ သာသနာ တွဲသွားနိုင်မှ သားစဉ်မြေးဆက်အတွက် နိုင်ငံနဲ့ သာသနာ ကောင်းမွန်စွာအမွှေအနှစ် ထားရစ်လို့သူတိုင်း ၂၀၀၇ခုနှစ်က ဆရာဒကာ ညီညွတ်ခဲ့သည့်အတိုင်း စုပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့နှစ်သစ်မှာဆုတောင်းရင်းတိုက်တွန်းနိူးဆော်လိုက်ရပါသည်။အရှင်ထာဝရ
Life of the Buddha in pictures from various editions such as from
Concentration by Pa Auk Sayadaw
ကဆုန်းလပြည်နေ့ ညောင်ရေးသွန်းပွဲ့ အမှတ်တရ ဘင်္ဂဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ
အိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ အကုသိုလ်များ ရှောင်းရှာပယ်လေ၊ ကုသိုလ်တရား ဖြစ်ပွားစုံစေ၊ မိမိစိတ်ဓါတ် ဆွတ်ဆွတ်ဖြူစေ။ ဤသုံးပါး ဘုရားဆုံးမပေး၊ လူတိုင်းလူတိုင်း စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။ အရှင်ထာဝရ
အို ရဟန်းတော်များ သင်ချစ်သားတို့ စိတ်ရှည်-ဇွဲသန်သည်းညည်းခံပြုရန်သာသနာ၊ သာသနာသည် ငါ့အတွက် ဖဖြစ်ပါစေနှင့် ၊ ငါသည်သာလျှင် သာသနာအတွက် ဖြစ်စေရမည်။ ရဟန်းတို့ အကြင်မျှလောက် ကာလပတ်လုံး အသင်တို့သည် အစဉ်မပြတ်စည်းရုံးညီညွတ်စွာသံဃာ ကိစ္စကို ပြုလုပ်၍ နေ၏။ အကြင်မျှလောက် ကာလပတ်လုံး အသင်တို့သည် သံဃာတာဝန် ဟူသမျှကို ဆောင်ရွက်နေ၏။ အကြင်မျှလောက် ကာလပတ်လုံး သံဃာ၏ စည်းကမ်းဥပဒေ တခုခုကို မကျူးလွန်၊ မဖောက်ဖျက်၊ အကြင်မျှလောက် ကာလပတ်လုံး အသင်တို့သည် မိမိတို့၏ သီတင်းသုံးဖော်အားလုံး၏ ချမ်းသာရေးကို ကြောင့်ကြ၍နေကြ၏။ ထိုမျှလောက်ကာလပတ်လုံး အသင်တို့သည် ဆထက်ထမ်းပိုး တိုးတက်မှု ရှိသွားပေလိမ့်မည်။ ဆုတ်ယုတ်မှုရှိတော့မည် မဟုတ်ပေ ဗုဒ္ဓု မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ္တံ ထုတ်နူတ်ဖော်ပြပါသည်။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဘုရား ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်သလဲတရားတော်။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ တရားမနာပဲနဲ့ သောတာပန် မတည်နိုင် တရားတော်။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ အတိတ်ကြွေး ဘာနဲ့ဆပ်မလဲ တရားတော်
ယမုံနာမြစ်အတွင်း ကမ္မ၀ါစာရွတ်ဖတိပွဲ့ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမ မရှိ ၊ ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမ မဟုတ်
နှစ်ဆယ်ခြောက်နှစ်မြောက် မွှေးနေ့အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ
နိုးဖိုးဒုက္ခသယ်စခန်း တရားပွဲ့ အမှတ်တရ
ထိုင်းနိုင်ငံ သသာနာ့ပြု အမှတ်တရ
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ အမှတ်တရ
ဂျပန်နိုင်ငံ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ အရှင်ထာဝရ